ကောင်းကင်ဖြူ: တနေ့တာ တဂ်
မင်္ဂလာပါ … ဗျာ … လိုင်းပေါ် မရောက် ဖြစ်တာလည်း ၃ ရက်ရှိပြီ ။ ဖြစ်ပုံ ကတော့ သုံးတဲ့ လိုင်းက လစဉ်ကြေး မဆောင် လို့ဆိုပြီး ဖြတ်လိုက်တယ် လေ … မောင်ဘုန်း လည်း ပေးရ မဲ့ ကိစ္စ ဆို အမြဲ မေ့တက် တယ် …. အေးလေ … အသက်ကြီး လာလို့ထင်ပါရဲ့ …
ကယ် … လိုင်းပေါ် မရောက်ဖြစ် တဲ့ နေ့ တွေမှာ ရေးထားတဲ့ ရေးမိရေးရာ အကြောင်းလေး တွေလည်း လက်စ မသတ် နိုင်သေးတော့ … အစ်မ ပစ်ပစ် တဂ် ပေးထားတာလေး ပဲ အရင် ရေးလိုက်ပါတယ် …
ဟုတ် … ၇ နာရီ ခွဲ တိတိမှာ ဖုန်းမှာ ပေးထားတဲ့ alarm ထအော် လို့မိုးလင်းပြီ ဆိုတဲ့ အသိ နဲ့ဘယ်ရောက်နေမှန် မသိတဲ့ စောင် ကို မျက်လုံး ပိတ်လျှက် အ၇င် ရှာ ပါတယ် … နေ့ စဉ် လုပ်နေကျမို့ လို့ကျွမ်းကျင် စွာဖြင့် မျက်လုံး ပိတ်ထားသော်လည်း ခဏ အတွင်းမှာ စောင် ကို ရှာတွေ့လို့စောင် ခြုံ ပြီး ပြန်အိပ် လိုက်ပါတယ် …
၂ မိနစ် အကြာမှာတော့ ဒုတိယ အကြိမ် ဖုန်း က alarm က ထအော် တဲ့ အသံကို မသိ ချင်ဟန် ဆောင် လိုက် ပါတယ် …
တတိယ အကြိမ် alarm မြည်တော့မှ မျက်လုံး ဖွင့် ပြီး ဖုန်း alarm ကို ပိတ် ရင်း screen ပေါ်က ပြုံး ပြနေတဲ့ ချစ်သူ ပုံ ကို ကြည့်ပြီး ပြန်ပြုံး ပြမိပါတယ် … မထင်ရင် မထင်သလို အာဘွား ဆို ပြီး လုပ်တက်သေးတယ် ….
မနက်စာကို ဘယ်လိုအစားအစာ စားရတာကြိုက်ပါသလဲ …..?????????????
အယ် …. ရန်ကုန် က ဦးရေခဲ မုန့် ဟင်းခါး ရယ် ၊ မန္တလေး ဈေးချို နားက ဆရာဝန် လင်မယား ရောင်းတဲ့ နန်းကြီး သုပ် ရယ် ကို အမေ ဖျော် ပေးတဲ့ ကော်ဖီ လေးနဲ့စားလိုက် ချင်တယ် ဗျာ …..
လောလောဆယ်နေ့တိုင်းစားဖြစ်နေတဲ့ မနက်စာ... ??????
လောလော ဆယ် … ဟုတ်လား …. အင်း ………….. အခုရက်ပိုင်း .. အယ် ၃ရက်ရှိပြီ ကော်ဖီ ကုန်နေလို့ရေနွေးကြမ်း နဲ့ကုလားဆိုင်းက ရောင်းတဲ့ ပြား ၈၀ တန် ရိုတီ ရယ် စားဖြစ်ပါတယ် … အယ် မေ့လို့ရိုတီ က ဒီနေ့ ပဲ ဈေးတက်သွားတယ် … ပြား၉၀ ဖြစ်သွားပြီ ….
နေ့လည်စာကို ဘယ်လိုနေရာမျိုးမှာစားရတာကြိုက်ပါသလဲ ….?????????????
နေရာမရွေးဘူး … အလကား ဆိုရင်ပေါ့လေ …
အခုလက်ရှိအစားချင်ဆုံးဟင်းကိုပြောပြပါ …. ?????
ခက်ပါရော လား … ငို ချင်ရဲ့ လက်တို့ဆိုသလိုတော့ ဖြစ်နေပြီ … အင်း … အခုစားချင်တာက ရှောက်သီးသုပ် ကို အမေ လုပ်ပေး တဲ့ လက်ဖက် ထမင်းနဲ့ငါးဖယ် ဟင်းခါး ပူပူလေးနဲ့….. အယ် …. ကျကုန်ပြီ … ကျကုန်ပြီ ….
အလုပ်မှာကော်ဖီ ဘယ်နှစ်ခွက် သောက်ပါသလဲ ….???????????????
အပူတော့ မသောက်ဘူးဖြစ်ဘူးလေ … ဒီမှာ လည်း အရမ်း ပူတော့ ကော်ဖီအေး ပဲ သောက်ဖြစ်ပါတယ် ….. ၃နာရီ ခွဲ ဆို အအေးသောက် နားပါတယ် … ကင်တင်း မှာ တစ်ယောက်ကို အအေး တစ်ခွက် နဲ့မုန့် တစ် တစ်ခု စားခွင့် ရှိတယ်လေ … ကျနော် ကတော့ နေ့ တိုင်း ကော်ဖီ အေး မှာ သောက်တယ်လေ ….
ညနေစာကိုဘယ်မှာစားတတ်ပါလဲ…… ?????????????
အယ် …. OT ရှိတဲ့ နေ့ တွေမှာ တော့ ကင်တင်း ကကျွေးပါတယ် … OT မရှိရင်တော့ အိမ်မှာ ပဲပေါ့ ….
ညနေစာစားရင်းနဲ့ အများဆုံးစဉ်းစားဖြစ်တတ်တဲ့ အကြောင်းအရာ ???????
မနက်ဖြန် ဘာချက်ရင် ကောင်းမလည်း လို့တွေးမိပါတယ် … ချစ်သူ ရော စားပြီးပြီ လားလို့တွေးနေတက်ပြီး ဖုန်းဆက် မေးတက် ပါတယ် …. ။
အလုပ်ဆင်းတဲ့ အချိန် မှာ တွေးမိတာ ကတော့ ပထမဦး ဆုံး ဒီနေ့ လုပ်ခဲ့ အလုပ်ကို ပြန်တွေးပြီး မှတ်ထား ပါတယ် နောက်နေ့ ဘယ်ကနေ စလုပ် ရမလည်းပေါ့ … ပြီးတော့ psss card ပေါ်က နေ့ တွေကြည့်ပြီး လစာထုတ်မို့လိုသေးပါလား တွေးမိ ပြန်တယ် ….
ဖိနပ် အရင် သိမ်း ပါတယ် … အခု မွေးထားတဲ့ ခွေးက အရင်ဘဝ က ဖိနပ် နဲ့ရန်သူ ဖြစ်ခဲ့ ပုံ ရတယ် ဗျ … ကုန်ပေါင်း မနည်းတော့ ဘူးလေ ….
ဒုတိယလုပ်မိတာလေး …………… ????????????????
ဖိနပ် စင် အောက်မှာ ဘယ်သူမှ မသိအောင် ဝှက် ထားတဲ့ အခန်းသော့ ကို ယူပါတယ် (နောက်နေ့ တော့ နေရာပြောင်းပြီ နော် )
ဟုတ် … OT မရှိတဲ့ နေ့ည ၈ နာရီ ဆို ရင် ကျနော် ကော်ဖီ သောက်ရမဲ့ အချိန်ပါ … အခုတော့ ကော်ဖီ ကုန်နေလို့ရေနွေး ကြမ်း ပဲ သောက်ဖြစ်တယ် ….
ညအိပ်ယာထဲဝင်ဝင်ခြင်းအချိန်ဘာအရင်ဆုံးလုပ်ပါသလဲ ………….. ????????????
အိပ့်ရာခင်းတယ် … ဘုရာ ရှစ်ခိုးတယ် …
အိပ်မပျော်တဲ့ညတွေမှာ ဘာလုပ်သလဲ ……... ???????????????
အယ် …. ဖြစ်ခဲ တယ်ရော … အိပ့်ဆို ….. တုန်း …. ကနည်းပဲ …
တရား နာဖြစ်တယ် … အယ် … အခု နှစ်ပိုင်းမှာ ချစ်သူ ကို ရင်ဖွင့် ပြီး ပြောပြတက် တာ အကျင့် တောင် ဖြစ်နေပြီ ….
အပြင်သွားတဲ့အခါ အမြဲတမ်းသတိထားပြီးယူတတ်တဲ့ပစ္စည်း …… ??????????????
ပတ်ပို့ စ် ကော်ပီ ….
မိသားစုဝင်တွေထဲမှာ အချစ်ရဆုံးသောလူ …… ????????????????
ရန်တိုက်ပေးတာတော့ … မဟုတ်ပါဘူးနော် … အမေ့ ကိုလည်း ချစ်တယ် ၊ အဖေ ကိုလည်း ချစ်တယ် ၊ အစ်မ ကိုလည်း ချစ်တယ် ၊ ညီမလေးကို လည်း ချစ်တယ် ၊ ညီလေး ကိုလည်း ချစ်တယ် ၊ အိမ်မှာ မွေးထား ငါးလေးတွေ ကိုလည်း ချစ်တယ် ၊ မဲလုံး လို့ နာမည်ပေးထားတဲ့ အိမ်က ခွေးလေး ကိုလည်း ချစ်တယ် … ပြီးတော့ အစ်မ ကို ယူပြီး ကြည့်မရ တဲ့ ဟိုလူကြီး ကိုလည်း ချစ်တယ် … ။
သူစိမ်းတွေအထဲမှာ မိမိအယုံကြည်ရဆုံးသူ ……….. ?????????????
ဘယ်သူ ရှိရမှာ လည်း ဗျာ … အရမ်း ချစ်ရတဲ့ ချစ်သူ ကောင်းကင်ဖြူ လေး ပေါ့ … ဘယ်လောက်တောင် ယုံ ကြည်လည်း ဆို ၇င် ၁၅ နှစ်သား လောက်က ရေကန်ထဲ ရေကူး ရင် ဘောင်ဘီး ကျွတ်ပြီး ရေထဲမှာ ဘယ်လို မှ ပြန်ရှာ လို့မရတော့လို့ရေထဲမှာ အကြာကြီးနေခဲ့ ရတဲ့ ကြောင်းကို ဘယ်သူကို မှ မပြောပြခဲ့ ဘူးလေ ချစ်သူကို ပဲ ပြောပြခဲ့တာ … အဲ့လောက်ကို ယုံကြည်တာလေ ….. သူများတွေ သိ၇င်တော့ ရှက်စရာကြီးလေ … ဘယ်ပြောလို့ဖြစ်မလည်း … နော် ….
အလုပ်ထဲမှာကိုယ်အခင်ဆုံးသူ …. ????????????
အင်ဒို လူမျိုးတစ်ယောက်ပါ … အလုပ် လုပ်လို့အခက်ခဲ တစ်တစ်ခုခု ဖြစ်လာ ၇င် အမြဲတည်း အကြံ ပေး အားပေးတက် တယ်လေ ….
ကျနော် မွေးနေ့ မှာ ချစ်သူ ဝယ် ပေးတဲ့ အဖြူ ရောင် အင်္ကျီ လေးပါ …
ပေါ်မှာ ပြောခဲ့ အင်္ကျီ လေးပါပဲ …
ကိုယ့်ပတ်သက်ဖူးတဲ့သူတွေထဲမှာကိုယ့်ကို နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်ဆုံးသူ ….. ????????????
ချစ်သူ ပါ …
အခုလောလောဆယ်အဖြစ်ချင်ဆုံးဆန္ဒ …. ???????????????
ခြင် ကိုက်တယ် ….. ခြင် မကိုက်တဲ့ နေရာမှာ ထိုင်ပြီး ဒီ တဂ် လေးကို သေသေချာချာ ကို ရေးချင်တာ
ခြင်ဆေး ကုန်နေတယ် လေ … ဒီနေ့မှ ခြင်တွေ လည်း ဘယ်ကနေ ဘယ်လို လာမှန် ကို မသိဘူး …
အယ် … မေးခွန်းလည်း မရှိတော့ ဘူး …
တစ်နေ့တစ်နေ့ချစ်သူကို ဘယ်လို လွမ်း ရတယ် … ဘယ်လောက်ထိ လွမ်း ရတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း လည်း မမေး ဘူး …. ပြောပြချင်ပါတယ် ဆို …. အစ်မ ပစ်ပစ် ရေ … နောက်တစ်ခါ တဂ် ပေးမယ် ဆိုရင် အဲ့ အကြောင်းတွေ ထည့်မေးနော် …
Posted by မောင်ဘုန်း at 8:42 AM
jasmine(တောင်ကြီး) January 6, 2012 at 1:21 PM
လမင်းငယ် January 6, 2012 at 1:59 PM
ဘိုဖြူ January 6, 2012 at 2:14 PM
ကိုထွဋ် January 6, 2012 at 6:18 PM
မထင်ရင် မထင်သလို အာဘွားတဲ့. ညက်နာလဲ မသစ် သွားလဲမတိုက်ပဲနဲ့နော်.. ဓာတ်ပုံမိုက တော်သေးတယ်..လူဆိုတေပီ.. :D
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် January 6, 2012 at 8:53 PM
ဖတ်သွားပါတယ် စကားမစပ် ဘောင်ဘီကော ပြန်တွေ့ရဲ့လား ဟိ
chocolatecupidlay January 7, 2012 at 7:47 AM
blackroze January 7, 2012 at 11:00 AM